Ho tonga miaraka amin'ny RAM 2 GB ny Xiaomi Mi Note 8 arak'ireo sary tafaporitsaka | Androidsis
Iray amin'ireo fitaovana Android izay mampiandry anao indrindra amin'ity 2016 ity ny Xiaomi Mi Note 2. Io no andiana finday smartphone tokana avy amin'ny orinasa sinoa mbola tsy havaozina amin'ity taona ity, ary efa hiditra amin'ny fararano isika.
Saingy, io fiandrasana ela io dia manamora ny famoahana be dia be ka afaka hiteny izahay hoe fantatsika ny zava-drehetra momba ity terminal Xiaomi "lehibe" vaovao ity. Ny farany amin'ireo sary tafaporitsaka, araka ny ho hitanao etsy ambany, dia manambara izany Mety hiatrika ny famoahana ny finday avo lenta miaraka amin'ny RAM lehibe indrindra eny an-tsena isika: 8 GB.
1 Mi Note 2 an'i Xiaomi dia miandry, saingy mampanantena
1.1 Ary ho avy miaraka amin'ny kinova Pro
Mi Note 2 an'i Xiaomi dia miandry, saingy mampanantena
Hatramin'ny nanombohan'ny Xiaomi Mi Note, dia efa nahita maso fanavaozam-baovao roa amin'ny andian-dahatsoratra Redmi Note izahay, na izany aza, miaraka amin'ity maodely ity dia mbola miandry izahay. Ary toa lasa mahazo ny tsirony i Xiaomi amin'ny hitazomana antsika miandry.
Soa ihany fa famoahana mitohy Mampitony ny fanahintsika izy ireo, na mety manome fanantenana lehibe kokoa? Na izany aza, efa ho avy ny Xiaomi Mi Note 2, andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy angamba.
Betsaka ny tsaho, famoahana, sary fampiasa ary atiny hafa efa niely tamin'ny tambajotra izay nanambara ny mampiavaka ny ankamaroan'ity phablet vaovao ity, na izany aza. ny famoahana farany indrindra dia manambara fantsona misy RAM 8 GB ary fitehirizana anatiny 256 GB.
Miaraka amin'ireo toetra ireo, ny Xiaomi Mi Note 2 dia mety ho lasa smartphone amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana RAM avo indrindra amin'ny tsena rehetra ankehitriny.
Nandritra ny taona lasa, nahita ampahany lehibe amin'ireo finday Android avo lenta nampiakatra ny fari-piainan'izy ireo hatramin'ny 3 GB ka hatramin'ny 4 GB izahay. Ankoatr'izay, ny làlana dia toa fiakarana mitohy izay fijanonana manaraka dia 6 GB. Na izany aza, ho avy ny Xiaomi Mi Note 2 miaraka amin'ny 8GB, izay dingana lehibe.
Ary ho avy miaraka amin'ny kinova Pro
Araka ny hitanao amin'ity sary voasivana ity, ny anarana manokana an'ity terminal ity Xiaomi dia Mi Note 2 Pro. Eny, eny, mbola miandry ny Mi normal 2 "mahazatra" izahay ary ny zava-drehetra dia manondro fa ny orinasa dia efa miasa amin'ny kinova Pro izay, heverinay fa havoaka kely taty aoriana, tahaka ny nataony tamin'ny taranaka fahatelo amin'ity terminal ity . Na izany aza, ny zava-misy fa efa mahita sary tafaporitsaka isika dia manondro ihany koa fa afaka mandefa Mi Note 2 sy Mi Note 2 Pro miaraka hatrany i Xiaomi. Tsy dia lavitra izany.
Ho fanampin'ny nomenclature azy sy ireo RAM 8 GB misy bibidia, dia afaka jerentsika ny fomba Xiami Mi Note 2 Pro ity dia ho tonga fenitra amin'ny rafitra fiasa finday Android 7.0 Nougat, zavatra izay hankasitrahan'ny mpampiasa tsy misy fisalasalana. Na dia, araka ny efa fantatrao, ny ampahany lehibe amin'ity rafitra ity dia hatolotra eo ambanin'ny sosona fanaingoana an'ny orinasa, ny rafitra MIUI, manintona kokoa noho ny fomba fijery hita maso.
Raha ny firoboroboan'ny fahatsiarovana RAM an'ny finday avo lenta dia mitombo hatrany, dia toy izany koa ny tahiry anatiny. Ny fitomboan'ny sary sy horonan-tsary avo lenta, na lalao misy graffiti manaitra, dia mitaky toerana bebe kokoa amin'ny mpampiasa hitahiry. Ary amin'io lafiny io dia toa izany Xiaomi koa dia handefa ny Mi Note 2 Pro miaraka amin'ny 256GB safidy fitehirizana anatiny. Raha ampiantsika amin'izany fa ity fahaiza-manao ity dia mety hitarina amin'ny alàlan'ny karatra micro SD, mahita terminal isika nefa tsy misy olana amin'ny habakabaka.
Ary farany, tonga hatrany am-pon'ny Mi Note 2, ny mpikirakira azy. Ny terminal vaovao an'i Xiaomi dia andrasana hampifangaro ilay puce mahery Qualcomm Snapdragon 821, izay nanolotra valiny tsara mihoatra ny Snapdragon 820, na eo aza ny vokatra tsara nomeny koa, ohatra, ao amin'ny Mi 5 mihitsy.
Toy ny mahazatra, ny Mi Note 2 vaovao an'i Xiaomi dia toa somary ambony noho ireo terminal hafa mitovitovy aminy eny an-tsena. Ary manantena izahay fa hijanona ny vidiny, toy ny mahazatra, voafehy tanteraka. Ankehitriny dia mijanona ho an'ny orinasa ihany ny mandefa azy amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ho tonga miaraka amin'ny RAM 2 GB ny Xiaomi Mi Note 8 arak'ireo sary tafaporitsaka ireo